बार्सिलोनामा ग्रीजम्यानको भविष्य संकटमा ! | Ratopati
बार्सिलोनामा ग्रीजम्यानको भविष्य संकटमा !
personएजेन्सी exploreकाठमाडौं access_timeबैशाख ७, २०७७ chat_bubble_outline0
फ्रान्स एवं बार्सिलोनामा स्ट्राइकर एन्टोइन ग्रीजम्यानलाई अहिले बार्सिलोना बेच्ने तरखरमा छ । समर ट्रान्सफरमा बार्सिलोनाले ग्रीजम्यानको विकल्पमा पेरिस सेन्ट जर्मन (पीएसजी) का स्टार नेयमार र लोउटारो मार्टिनेजलाई अनुबन्ध गर्ने तयारी गरेको छ ।
नेयमार र मार्टिनेज बार्सिलोना आएपछि ग्रीजम्यान जगेडा हुने निश्चित जस्तै छ । तर एक बर्षअघि बार्सिलोना आएका ग्रीजम्यानले आफूले कुनै हालतमा बार्सिलोना नछाड्ने बताएका छन् ।
‘म अब एक सिजन कुनै क्लबमा जान्न । बार्सिलोनामै आफूलाई थप प्रमाणित गर्न चाहन्छु । पूर्ण फिट भएकोले म भित्र त्यो क्षमता छ,’ २९ बर्षीय ग्रीजम्यानले भनेका छन् । सन् २०१९ मा एथ्लेटिको म्याड्रि«डबाट बार्सिलोना आएका ग्रीजम्यानलाई लियोनल मेस्सी, लुईस स्वारेजसँगै स्ट्राईकिङको लाइनको जिम्मामा दिइएको थियो ।
स्वारेज घाइते भएपछि बार्सिलोनाले ग्रीजम्यानसँग थप आशा गरेको थियो । तर आशा अनुरुप ग्रीजम्यानले खेल्न नसकेको भन्दै बार्सिलोनाले उनको विकल्प खोज्ने तयारी गरेको हो । यदि नेयमार र मार्टिनेज बार्सिलोना आएमा ग्रीजम्यानलाई मैदान प्रवेशमै थप संटक पर्ने बताइएको छ । बार्सिलोना आउनासाथ मेस्सीसँग सम्बन्ध चिसिएका कारणले पनि ग्रीजम्यान त्यति जम्न सकेका थिएनन् ।
विस्तारै लयमा देखएका ग्रीजम्यानको बार्सिलोना मोह अझै बाँकी छ । त्यसैले उनी बार्सिलोनामै बसेर थप मिहिनेत गर्ने दावी गरिरहेका छन् । ग्रीजम्यानले ला लिगामा यस सिजन २६ खेल खेल्दै आठ गोल गरेका छन् । बार्सिलोना भने यसपटक टोलीका पूराना खेलाडी मेस्सी, फ्राङ्क डि जोङ, गोलरक्षक मार्क आन्द्रे टेर स्टेगन लगायत केही खेलाडी बाहेक अरुलाई फेरबदल गर्ने तयारीमा छ ।
कोरोना भाइरसले निम्त्याएको आर्थिक संकटका कारण बार्सिलोना स्टार खेलाडी अनुबन्ध गर्नु भन्दा खेलाडी फेरबदलको जुक्ति लगाउँदै छ ।
कोरानाभाइरसका बाबजुद जर्मनीमा फुटबल सुरु, शनिबार ६ खेल हुँदै
दक्षिण कोरियाः फुटबल म्याचमा ‘सेक्स डल’ चियरलिडर
फर्कियो बुन्डेसलिगा, चम्किए हालान्ड